11 Oktobra 2019 - FJKM Québec - Canada
10 octobre 2019 by Njaka Ramanandafy
JEREMIA 10 : 1-25
10:1 Henoy ny teny izay lazain’ i Jehovah aminareo, ry taranak’ isiraely!
10:2 Izao no lazain’ i Jehovah: Aza mianatra ny fomban’ ny jentilisa; ary aza mivadi-po amin’ ny famantarana eny amin’ ny lanitra; fa ny jentilisa no mivadi-po amin’ izany.
10:3 Fa ny fanaon’ ny firenena dia zava-poana; misy mikapa hazo avy any an’ ala, dia asan-tanan’ ny mpiasa amin’ ny famaky.
10:4 Volafotsy sy volamena no andravahany azy, ary fantsika sy tantanana no amehezany tsy hampihetsika azy.
10:5 Mahitsy toy ny hazo palma izy fa tsy miteny; mila entina izy satria tsy afa-mandeha. Aza matahotra azy, fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa.
10:6 Noho izany, tsy misy tokoa izay tahaka Anao Jehovah ô; lehibe ianao, ary lehibe amin’ ny hery ny anaranao.
10:7 Iza no tsy hatahotra Anao, ry mpanjakan’ ny firenena? Fa Ianao no iendrehan’ izany, fa amin’ ny hendry rehetra amin’ ny firenena, sy amin’ ny fanjakana rehetra dia tsy misy tahaka Anao.
10:8 Fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra; ny tapa-kazo dia foto-pampianaram-poana.
10:9 Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza izany, asan-tanan’ ny mpiasa sy ny mpandrendrika volamena; lamba manga sy volomparasy ny fitafiany; asan’ ny mahay zavatra izy rehetra.
10:10 Fa Jehovah no Andriamanitra marina, Izy no Andriamanitra velona sy Mpanjaka mandrakizay, hangovitra ny tany amin’ ny fahatezerany, ka tsy ho tantin’ ny firenena ny fahavinirany.
10:11 Izao no holazainareo amin’ ireny: ny andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levona tsy ho amin’ ny tany na ho ambanin’ ireto lanitra ireto.
10:12 Izy no nanao ny tany tamin’ ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin’ ny fahendreny, ary namelatra ireo lanitra tamin’ ny fisainany.
10:13 Raha mamoaka ny feony Izy dia mirohondrohona ny rano any an-danitra, ary mampiakatra entona avy any amin’ ny faran’ ny tany Izy; manao ny helatra ho amin’ ny ranonorana Izy sady mamoaka ny rivotra avy amin’ ny firaketany.
10:14 Efa ketrina avokoa ny olona rehetra amin’ ny fahalalany; menarina noho ny sarin-javatra voasokitra ny mpandrendrika rehetra; fa fitaka ny sarin-javatra an’ idiny, sady tsy misy fofon’ aina ao aminy.
10:15 Zava-poana izy ireny ary asan’ ny fahadisoana; amin’ ny andro hamaliana azy dia ho levona izy.
10:16 Tsy mba tahaka ireo ny Anjaran’ i Jakoba, fa Mpamorona ny zavatra rehetra Izy; ary ny Isiraely no Tehin’ ny lovany, Jehovah, Tompon’ ny maro, no anarany.
10:17 Angony ny korontan’ entanao ka ento miala amin’ ny tany, ry mponina ao amin’ ny fiarovana mafy!
10:18 Fa izao no lazain’ i Jehovah: Indro, hatorako ho indray misidina toy ny vaton’ antsamotady ny mponina amin’ ny tany, ary hampahoriako izy mba ho hitany izany.
10:19 Loza ho ahy noho ny ratrako! Maharary ny feriko; nefa hoy aho: Fahoriana tokoa izao, nefa tsy maintsy zakaiko.
10:20 Rava ny laiko, ary tapaka avokoa ny kofehin-daiko; lasa tsy ho eo amiko ny zanako, ka tsy misy intsony, eny, tsy misy hamelatra ny laiko intsony na hanantona ny ambain-daiko.
10:21 Fa efa ketrina ny mpiandry ondry ka tsy nitady an’ i Jehovah, izany no tsy hanambinana azy, sady hiely ny ondry aman’ osiny rehetra.
10:22 Indro, tamy ny feon’ ny siosion-teny amin’ ny fihorakorahana be avy amin’ ny tany avaratra, mba hahatonga ny tanànan’ ny Joda ho lao sy ho lavaky ny dragona.
10:23 Jehovah ô, fantatro fa tsy an’ ny olombelona ny lalan-kalehany, na an’ ny mpandeha ny fitarihana ny diany.
10:24 Jehovah ô, anaro aho, nefa araka ny rariny; fa tsy amin’ ny fahatezeranao, fandrao hataonao tonga tsinontsinona aho.
10:25 Aidino amin’ ny jentilisa izay tsy mahalala Anao ny fahatezeranao, sy amin’ ny taranaka izay tsy miantso ny anaranao; fa efa nihinana an’ i Jakoba ireo, eny, nihinana sy nahalevona azy ary nahalao ny fonenany.
Hoy ny teny eto: « Fa efa kentrina ny mpiandry ondry ka tsy mitady an’i Jehovah. Izany no tsy mahahendry azy , ka dia niely ny ondry andrasany rehetra » (and21). Ny mpiandry ondry dia ilazana ny mpitondra eo amin’ny fiangonana sy ny frenena. Raha kentrina tsy mitady an’ Andriamanitra na ny mpitondra, mijaly ny vahoaka toy izay naha-onena an’i Jesoa (Mat 9.36).
Aza adinoina eo amin’ny fiainantsika manontolo ny tonombavak’i Jeremia ity :’Jehovah ô fantatro fa tsy an’ny olombelona ny làlan-kalehany , na an’ny mpandeha ny hahalavorary ny diany » (and23). Koa amin’ny fikasana rehetra , amin’ny planina arafitra rehetra : omeo toerana ao i Jesoa ,ekeo ny hotarihan’ny Fanahy Masina ,ekeo ny sitrapo ‘ Andriamanitra .